Gịnị bụ Amazon ịkwụ ụgwọ na otú ọ na-arụ ọrụ? | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Ụzọ ịkwụ ụgwọ, Ahịa azụmahịa
Nkwụnye ụgwọ Amazon, ma ọ bụ nke amara nke ọma ugbu a dị ka Amazon Pay, bụ otu n’ime usoro ịkwụ ụgwọ ntanetị nke na-eme doro anya na ọ na-ama PayPal aka. A na-ejikarị ya na America, mana ọ bụghị nke ukwuu na Europe, ọbụlagodi ruo ugbu a.
Ma, Kedu ihe bụ ịkwụ ụgwọ Amazon? Ọ dị mma? Kedu uru ị nwere ike ịnye anyị? Ihe niile na ọtụtụ ihe bụ ihe anyị ga-ekwu maka n'okpuru ka ị mara nke a na ntanetị n'ịntanetị zuru ezu.
1 Gịnị bụ Amazon ịkwụ ụgwọ
2 Akwụ ụgwọ Amazon ọ dị mma?
3.1 Uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye zụrụ ahịa
3.2 Uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ere
4 Etu esi akwụ ụgwọ Amazon
4.1 Otu esi akwụ ụgwọ na Amazon Payments
5 Nkwụ ụgwọ Amazon na-akwụ ụgwọ na ụgwọ
Gịnị bụ Amazon ịkwụ ụgwọ
Nkwụ ụgwọ Amazon bụ usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, nke na-enye ndị ahịa ohere ịkwụ ụgwọ maka ịzụta ha site na iji akaụntụ Amazon. Iji kwụọ ụgwọ, ndị ahịa nwere ike iji kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ ma ọ bụ jiri ya edozi na akaụntụ Amazon Payments.
Ndị ọzọ okwu, ọrụ na-eji ozi echekwara na akaụntụ Amazon gị, iji banye ma kwụọ ụgwọ ozugbo na ibe weebụ niile na-anabata usoro ịkwụ ụgwọ a. Ndị ọrụ nwere ike ịlele ọnọdụ nke ịkwụ ụgwọ ahụ ma ọ bụ wepụta nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụ elezighi anya, naanị site na ịpị na Bọtịnụ ịkwụ ụgwọ Amazon nke dị na ala azụ ahịa ahịa gị.
Nkwụnye ụgwọ Amazon na-etinye ego na akaụntụ ịkwụ ụgwọ ozigbo onye ahịa ahịa gabigara ya. N'oge a ọ dị mkpa ịkọ na a na-edebe ego ahụ na akaụntụ ahụ ruo ụbọchị iri na anọ ka e mesịrị dịka nchekwa na mgbe oge ahụ gasịrị, enwere ike ịfefe ego na akaụntụ akụ ma ọ bụ kaadị onyinye Amazon.
Akwụ ụgwọ Amazon ọ dị mma?
Mgbe ị na-eji a online ugwo ikpo okwu, Inwe obi abụọ nwere ike ịdakwasị gị, tụmadị gbasara ịkwụ ụgwọ dị mkpa. Onye ọ bụla n'ime nyiwe ndị a nwere sistemụ nchekwa nke na-eme ka ha nwekwuo nchebe. Mana, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, isi okwu n'okwu banyere ịkwụ ụgwọ Amazon bụ na ọ na-echebe data onye ọrụ. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na ị nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-enweghị njikọ na Amazon na-enweghị inye data nkeonwe gị ma ọ bụ mkpa ịdebanye aha mgbe ịzụrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Amazon ga-echebe njirimara gị na azụmaahịa dị n'ịntanetị (eCommerce) ga-ama naanị banyere gị akaụntụ ahụ enyere maka ịkwụ ụgwọ. Ma nke a agaghị abụ ụlọ akụ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Email ahụ ga-eme ihe, dịka ọ na-eme na PayPal, naanị nke a, na nke a, anyị na-ekwu maka email ahụ nke anyị debanyere aha na Amazon.
N'ihi ya, Amazon na-abụ onye nnọchiteanya mgbe ị na-azụta ntanetị n'ịhụ na azụmahịa ahụ rụrụ nke ọma na, ma ọ bụghị, na-azọrọ.
Nkwụnye ụgwọ Amazon na-agbaso ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụkpụrụ ahụ dị ka PayPal, ihe ọzọ nke nyiwe na-aga nke ọma ma a bịa n'ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị. Otú ọ dị, dị ka ọ bụla n'ime ha, ọ nwere uru na ọghọm ya.
N'izugbe, Uru nke Amazon Pay bụ ihe ndị a:
Ohere nke ịzụta ngwa ngwa, na-enweghị itinye data nkeonwe gị, mana iji usoro ịkwụ ụgwọ ha na-elekọtarịrị ihe niile.
Guarantee nwere nkwenye nke Amazon A to Z, nke na-echebe gị ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ abụghị ihe ị tụrụ anya ya, ọ mebiri emebi ma ọ bụ gbajie, ma ọ bụ ezigaghị gị.
Zụta n'ụzọ dị nchebe, n'ihi na ị gaghị ekenye onye na-ere gị ozi gị, ma ọ bụ nye ya ụfọdụ.
Enwere ike inye onyinye nye ndị NGO.
Banyere ndọghachi azụ, isi ihe nke ikpo okwu a bụ, na-enweghị mgbagha, mmejuputa ya. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ eCommerce na-etinye Paypal dị ka ụzọ nkwụnye ụgwọ, otu ihe anaghị eme n'ihe banyere ịkwụ ụgwọ Amazon. Nke a adịghị n'ọtụtụ ụlọ ahịa n'ịntanetị dịka ịchọrọ, nke na-egbochi oke iji ya.
Uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye zụrụ ahịa
Na-egwu ala ntakịrị n'ime ikpo okwu, anyị nwere ike ịchọta uru maka ndị na-azụ ma na-ere ere. N'ihe banyere nke mbụ, otu uru dị na ya bụ na, dị ka onye na-azụ ahịa, ị gaghị enye ozi gbasara onwe gị n'ịzụta gị. N'ezie, ị chọghị inye adreesị gị iji nyefee iwu ahụ, Ebe ọ bụ na Amazon nwereworị data ahụ ma ọ bụ ya ga-elekọta ihe niile.
Na mgbakwunye, ị nwere nchedo ụbọchị 90 iji kwuo, ihe na, yana nyiwe ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ na PayPal, belata na ụbọchị 60.
Uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ere
Dị ka ndị na-ere ahịa, iji Amazon Payments nwekwara uru ya, ọ bụ ezie na ọ na-amalite site na isi ọghọm. Nke ahụ bụ na, ịghara ịnye data ndị na-azụ ahịa, ị nweghị ike ịdebanye aha onye ahịa ahụ na nchekwa data gị, yabụ na ị nweghị ike ịgụta ya maka okwu nkwado ma ọ bụ ndenye aha (belụsọ na onye ahụ kwenyere ịnọ na ha).
Mana, n'etiti uru ndị otu a, otu n'ime ha bụ nwere ozi ndị dị mkpa iji nwee ike ịme akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ mbupu. A na-enye ndị na-ere ozi a ozi site na akaụntụ ndị na-ere gị, a ga-echebe ya ka ị ghara iji ya mee ihe n'efu, mana naanị ya na ọrụ kwekọrọ, zitere gị ngwaahịa ị zụrụ.
N'aka nke ọzọ, a ga-echebekwa ndị na-ere ahịa pụọ ​​na aghụghọ, n'ụzọ nke na nchekwa ọ bụghị naanị maka ndị ọrụ, kamakwa maka ndị na-ere ya.
Etu esi akwụ ụgwọ Amazon
Ndị ahịa nwere ike ịdọrọ ego na akaụntụ Amazon Payments n'oge obula mgbe obula ha di. Dọrọ ego na akaụntụ akụ na-ewekarị ụbọchị 5 ruo ụbọchị azụmahịa 7, dabere na ụlọ akụ.
Ọ dịkwa mkpa ịkọwa na mbupu na ozi ịkwụ ụgwọ niile echekwara na nchekwa na Akaụntụ ịkwụ ụgwọ Amazon, ya mere onye ahịa nwere ike ịnweta ya iji kwụọ ụgwọ maka ngwongwo ma ọ bụ ọrụ ha.
N'ụzọ dị otú a, ọ dịghị mkpa ịnwe ọtụtụ akụkọ, ebe ọ bụ naanị na ịchọrọ banye na Amazon ma jiri akaụntụ Amazon Payments ịkwụ ụgwọ na-enweghị ịbanyeghachi ozi kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ozi nkeonwe na ego ọzọ.
Ugbu a, ohere nke iji Amazon Payments dị na nyiwe e-commerce dị ka Shopify, Prestashop, Magento na WooCommerce. Ha niile na-eji ngwa mgbakwunye akọwapụtara iji kwado usoro ịkwụ ụgwọ a yana ọ dị mfe ịwụnye ma jiri, nke na-enye ndị ahịa nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nhọrọ ndị ọzọ.
Otu esi akwụ ụgwọ na Amazon Payments
Ọ bụrụ na ọ ghọtabeghị gị, ị kwesịrị ịma nke ahụ usoro ịkwụ ụgwọ na Amazon ịkwụ ụgwọ mgbe niile na-eme site na Amazon (ma ọ bụ site na Amazon Prime). Iji mee nke a, ị ga-edebanye aha ma nwee ụzọ ịkwụ ụgwọ. Dị ka ị maara, naanị ndị a nabatara na nke a bụ kaadị debit, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị akwụ ụgwọ, ịnakwere ndị kachasị, dị ka MasterCard, Maestro, American Express, Visa Electron, Visa ...
Ozugbo ị nwere usoro ịkwụ ụgwọ ahụ, ịnwere ike iji ya na eCommerce ebe ha nyeere ịkwụ ụgwọ site na Amazon Payments ma ọ bụ Amazon Pay, ma site na kọmputa, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ọbụna site na iji iwu olu.
Nkwụ ụgwọ Amazon na-akwụ ụgwọ na ụgwọ
Ọ bụ ezie na enweghị ego maka ndị na-azụ ahịa iji usoro ịkwụ ụgwọ a, nke a abụghị ikpe maka ndị na-ere ahịa. Iji mee ka ha kweta ịkwụ ụgwọ site na Amazon Payments, ha ga-akwụ ụgwọ ọrụ, dịka ihe na-eme n'ihe banyere PayPal.
Ya mere, na udu ndị dị ka ndị:
Ọ bụrụ ha azụmahịa mba, E kere ya ụzọ ise, ọ bụ n’ego ole ka ọ dị. Kpọtụrụ:
Ihe na-erughị € 2.500 kwekọrọ na ọnụego nke 3.4% + € 0,35.
Site na ,2.500,01 10.000 ruo € 2.9 kwekọrọ na ọnụego nke 0,35% + € XNUMX.
Site na ,10.000,01 50.000 ruo € 2.7 kwekọrọ na ọnụego nke 0,35% + € XNUMX.
Site na ,50.000,01 100.000 ruo € 2.4 kwekọrọ na ọnụego nke 0,35% + € XNUMX.
Ihe karịrị € 100.000 kwekọrọ na ọnụego 1.9% + € 0,35.
Ọ bụrụ ha azụmahịa mba ụwa, ịkwụ ụgwọ ga-achọ mgbakwunye ego ga-adabere na ebe a kwụrụ ụgwọ ahụ, ọ bụrụ na Europe, Canada, Albania ... N'echiche a:
Mpaghara European Economic na Switzerland anaghị akwụ ụgwọ ọrụ.
Canada, Channel Islands, Isle nke Mmadụ, Montenegro, United States, na-akwụ ụgwọ ọrụ 2%.
Albania, Bosnia na Herzegovina, Russian Federation Macedonia, Moldova, Serbia, Turkey, Ukraine ga-enwe kọmitii nke 3%.
Ndị ọzọ nke ụwa na-achịkwa ọrụ 3.3%.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Gịnị bụ Amazon ịkwụ ụgwọ na otú ọ na-arụ ọrụ?
Achọrọ m ozi banyere otu esi emepụta akaụntụ ịkwụ ụgwọ ego.
Zaghachi na MINELA CAROLINA ESTRADA
Ndi ugwo Amazon di na Mexico?
Ndi mgbere na El Salvador, Central America nwere ike iji ọrụ ịkwụ ụgwọ a?
Zaghachi Edwin López
Kedu ikike ngalaba na kedu ka ị ga - esi meziwanye ya?